🥇 ukubalwa kwedesika yoncedo
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 305
Ividiyo yocwangciso-mali lwedesika yoncedo
Odola i-accounting yedesika yoncedo
Kwiminyaka yakutshanje, iDesika yoNcedo yokuphendula i-accounting ilawulwa ngenkqubo ekhethekileyo ezenzekelayo, evumela iinkampani ze-IT ukuba zisebenze ngakumbi ngezicelo kunye nezibheno, zinike uncedo ngokufanelekileyo, ziphucule kwaye ziphuhlise inkonzo. Ayizizo zonke iiprojekthi ezimiselwe ukujongana kuphela ne-accounting, ukungaphazanyiswa yimiba emincinci, ukutshintshela ngokukhululekileyo phakathi kweenkqubo zeDesika yoNcedo, ukufumana isisombululo ngokukhawuleza, kwaye ungathwali abasebenzi abaninzi ngemisebenzi engeyomfuneko.
Ubuchwephesha beDesika yoNcedo oluPhezulu olusuka kwinkqubo yeSoftware ye-USU (usu.kz) ifunde ngokwaneleyo ukuze iqonde ishishini, yazi malunga neendlela zamva nje kunye nemigangatho, kwaye ivelise iimveliso ezifanelekileyo ezithi zisebenze ngokwenene kwaye zivelise imveliso. Akusiyo imfihlo injongo yeqonga ayiphelelanga kwi-accounting yokusebenza. Ikwajongene nemiba yonxibelelwano, ibeka iliso kwizikhundla zengxowa-mali yezinto eziphathekayo, yenza itafile yabasebenzi besakhiwo, ilungiselela ngokuzenzekelayo iingxelo kunye nayo nayiphi na imimiselo. Iirejista zeDesika yoNcedo ziqulethe ulwazi olusisiseko malunga nezicelo kunye nabaxhasi. Ulwazi lwe-Accounting lulula ukubonisa kwizikrini, ukutshintshiselana ngolwazi nabanye abasebenzisi, kunye neengxelo kunye namaxwebhu. Akukho mfuneko yokusebenzisa iinkqubo zomntu wesithathu. Ukuba kuthathelwa ingqalelo, kukho naziphi na iingxaki, abasebenzi abahlangabezani nemihla yokugqibela, akukho zixhobo eziyimfuneko zokulungisa ukungasebenzi kakuhle, ngoko abasebenzisi baya kuba ngabokuqala ukwazi ngayo. Kwanele ukwenza imodyuli yesaziso eyakhelwe-ngaphakathi kwaye unokugcina izandla zakho ngokukhuselekileyo kwi-pulse yolawulo. Iinkqubo zeDesika yoNcedo ziboniswa ngexesha lokwenyani. Ulwazi lwe-Akhawuntingi luhlaziywa ngamandla. Ngenxa yoko, abasebenzisi banokusabela kwizicelo ngesantya sombane, benze uhlengahlengiso, bafunde iingxelo zohlalutyo zamva nje kwaye benze izigqibo zolawulo. Imiba yonxibelelwano lwabathengi ivalwe ngempumelelo kusetyenziswa uqwalaselo lweDesika yoNcedo. Kulula kakhulu ukutshintshiselana ngedatha ye-accounting ngemodyuli yemiyalezo yeSMS, xela iziphumo zomsebenzi zakutsha, ingxelo, ukunika izabelo, ukubhengeza iinkonzo zemibutho. Ngokuhamba kwexesha, ulungelelwaniso lweDesika yoNcedo alunakuphinda luthathelwe indawo. Zisetyenziswa ngokukhutheleyo ziinkampani ezikhokelayo ze-IT ukulungelelanisa ukugcinwa kweerekhodi zokusebenza, ukuphelisa ubuncinci obunokwenzeka beempazamo kunye nokungachaneki, kunye nokwazisa ulawulo olutsha kunye nezixhobo zentlangano. I-automation ibonakala iyisisombululo esona sisombululo sokwandisa iiparameters zomsebenzi wezakhiwo, ukukhulula abasebenzi kumthwalo wemihla ngemihla, kwaye ungachithi ixesha elongezelelweyo kwiinkqubo eziqhelekileyo. Iprojekthi iphuhla ngamandla. Izongezo ezihlawulweyo ziyafumaneka. Uluhlu oluhambelanayo lufakwe kwiwebhusayithi.
I-platform yeDesika yoNcedo ibeka iliso kwizikhundla zenkonzo kunye nenkxaso yobugcisa, inoxanduva lwemiyalezo engenayo kunye nezicelo, imihla ebekiweyo, kwaye ivala unxibelelwano kunye nabaxhasi. Ukugcina iirekhodi zokusebenza kuba lula kakhulu xa abalawuli abayimfuneko kunye neekhathalogu zikufuphi. Kuyenzeka ukugcina oovimba bedijithali. Ukubhaliswa kwexesha elitsha lesibheno lancitshiswa kakhulu. Inkqubo yesicelo izenzekela ngokupheleleyo. Unokuxhomekeka kwisicwangcisi esakhelwe ngaphakathi kuyo yonke into enxulumene nabasebenzi, imihla ebekiweyo yokuhlangana, kunye nezicwangciso zesakhiwo.
Uqwalaselo lweDesika yoNcedo luphunyeziwe ngogxininiso lokuthuthuzela ukusetyenziswa kwemihla ngemihla. Kwangaxeshanye, inkqubo ayibeki phambili iimfuno ezikhethekileyo ngokwenqanaba lolwazi lwekhompyutha, izakhono, okanye amava.
Ukuba izibonelelo ezongezelelweyo zifuneka ngokukhawuleza kwimisebenzi ethile, ngoko olu lwazi lwe-accounting luboniswa ngokukhawuleza kwizikrini. Abasebenzisi baya kuba ngabokuqala ukwazi ngayo.
Umsebenzi wenkonzo uquka izigaba eziliqela, nganye kuzo ilawulwa yingqondo yokwenziwa. Kunikwe ithuba lokuhlala unxibelelana nabathengi ngokuthumela i-SMS eninzi. Ngeqonga leDesika yoNcedo, kulula kunangaphambili ukutshintshiselana ngolwazi ngezicelo ezifunyenweyo, ukuthumelana amaxwebhu, imizobo, iingxelo, kunye nolunye uluhlu lweenkcukacha. Idatha ye-accounting ye-metrics yokusebenza kwezakhiwo iboniswa ngokubonakalayo, enceda ukufumanisa ngokukhawuleza iingxaki ezincinci kunye nokwenza uhlengahlengiso oluchanekileyo. Ukwazisa abasebenzisi malunga neziganeko zangoku zombutho unikezelwe kwimodyuli yedijithali ehambelanayo.
Musa ngoyaba ukukwazi ukudibanisa neenkonzo eziphambili kunye neenkonzo. Uluhlu lupapashwa kwiwebhusayithi. Iinkampani ezininzi ze-IT, oosomashishini ngabanye, amaziko eenkonzo, kunye nemibutho karhulumente ekhonza uluntu ifumene inkqubo. Ayizizo zonke iindawo ezifumene indawo kubumbeko olusisiseko. Ezinye iinketho zinikezelwa ngokwahlukeneyo. Sincoma ukuba uziqhelanise neempawu zokusebenza. Qala ngovavanyo ukuze wazi ngcono imveliso, uchonge amandla, kwaye uvavanye ngononophelo izinto eziluncedo nezingalunganga. Namhlanje, imibutho emininzi ijongene nengxaki engxamisekileyo, ebandakanya imfuneko yokunciphisa iindleko kunye nokuphuculwa rhoqo komgangatho weempahla kunye neenkonzo ezinikezelwayo. Kwimeko yezoqoqosho yangoku kunye nokuqiniswa kokhuphiswano phakathi kwamashishini, imfuno yokunciphisa iindleko okanye iindleko zokuvelisa ibe ngumsebenzi onzima ngakumbi. Ngamanye amazwi, ukufaneleka kwenkqubo yokuphucula kuxhomekeke kwimfuno yokuphucula ukusebenza kakuhle kwamashishini kunye nemibutho, kuthathelwa ingqalelo ukubandakanyeka okuphantsi kwabanini bamashishini malunga nokuphucula iinkqubo zoshishino. Ubalo-mali lweDesika yoNcedo luza kuhlangula.